मेटाइएको ईमेल पुन: प्राप्ति आउटलुकमा - DataNumen
घर उत्पादन DataNumen Outlook Repair मेटाइएको ईमेल पुन: प्राप्ति आउटलुकमा
मेटाइएको ईमेल पुन: प्राप्ति आउटलुकमा
गल्तीले ईमेलहरू मेटाउने हो?
तपाईंको मेटिएको वस्तु फोल्डरलाई चाँडै नै खाली गर्नुहुन्छ?
Lost रिकभर गर्न नसक्ने ईमेलहरू?
PST फाईलमा अनौंठो त्रुटिहरू?
Lost तपाईको PST फाईलका लागि पासवर्ड?
आउटलुक मेल रिकभरी समस्याहरू?
DataNumen Outlook Repair सजीलै यी सबै र बढि फिक्स गर्दछ।
आउटलुकबाट सामान्य रूपमा मेटाइएको ईमेल पुन: प्राप्ति सरल छ। जब मेटाउने बटन क्लिक हुन्छ, ईमेल वास्तवमा मेटाइएको वस्तु फोल्डरमा राखिन्छ। फोल्डरमा जाँदा ईमेललाई पूर्ण पढ्नको लागि अनुमति दिन्छ, र यसलाई सजिलै फरक फोल्डरमा सारिन सकिन्छ।
यदि, तथापि, हटाइएको आइटम फोल्डर खाली गरिएको छ, वा यदि वस्तु Ctrl-हटावट (माइक्रोसफ्टले हार्ड ड्राइभलाई सन्दर्भित गर्छ) को साथ हटाइएको छ भने, ईमेल स्थायी रूपमा आउटलुकबाट हटाइनेछ। आउटलुक ईमेल रिकभरी त्यसपछि धेरै धेरै गाह्रो हुन्छ।
माईक्रोसफ्टको समर्थनका अनुसार, "... यदि तपाईले मेटाउनु अघि मेटाइएको वस्तु फोल्डरमा आईटमहरू सार्नुहुन्न भने यी वस्तुहरू कडा मेटिनेछन्, र तपाई त्यसलाई मेटाइएको वस्तु फोल्डरबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्न।"
त्यस्तो ईमेल हटाउने एक मात्र तरिका प्रयोग गर्नु हो DataNumen Outlook Repair - समस्या सुल्झाउको छिटो र सरल कार्य बनाउँदै।
आउटलुक,,, 97,, २०००, २००२, २००,, २००,, २०१०, २०१ 98, २०१ 2000 र २०१ with का साथ काम गर्दछ।
पूर्ण आउटलुक मेल सन्देशहरू, फोल्डरहरू, पीosts, नियुक्तिहरू, बैठक अनुरोधहरू, सम्पर्कहरू, वितरण सूचीहरू, कार्यहरू, मेमोहरू, पत्रिकाहरू, नोटहरू र अधिक।
आउटलुकमा सबै ईमेल हटाउन सकिन्छ - सादा पाठ हो, RTF वा HTML ढाँचा।
आउटलुक मेल संलग्नकहरू पूर्ण रूपमा रिकभरी हुन्छन्।
इम्बेडेड वस्तुहरू पूर्ण रूपमा पुन: प्राप्त हुन्छन्।
आकारमा २ GB भन्दा बढि PST फाईलहरूको लागि समर्थन र स्पस्टि if PST फाइलहरूको लागि आवश्यक छ भने।
आउटलुक -97 -2002 -२००२ र आउटलुक २००-2003-२०१० ढाँचामा PST फाईलहरू उत्पादन गर्नका लागि समर्थन।
ब्याच मर्मत समर्थित।
कुनै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक छैन।